ई-पासपोर्टको सफल कार्यान्वय हुँदै
चोरी भएका ,हराएका राहदानीमा यात्रा नगर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
विद्युतीय राहदानीको सेवा शुरु भइ सकेका जिल्लाहरुः
झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ्ग, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, लमजुङ्ग, गोर्खा, कास्की, परासी, रुपन्देही, बुटवल, कपिलबस्तु, गुल्मी, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर । काभ्रेमा जडान कार्य सबै सकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट शुरुआत हुन बाँकी । रामेछापमा सबै जडान कार्य सकिएको र माघ १० गतेबाट लाइभ इनरोलमेन्ट […]
January 23, 2022Read More
६६ पृष्ठको राहदानी वितरण आजदेखि शुरु
राहदानी विभागले ६६ पृष्ठको राहदानी वितरण आजदेखि शुरु गरेको छ । महानिर्देशक श्री डोरनाथ अर्यालले पहिलो ६६ पृष्ठको राहदानी वितरण गर्दै ।
January 2, 2022Read More
विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
भक्तपुरमा आजदेखि दिन थालियो विद्युतीय राहदानी
December 8, 2021Read More
विद्युतीय राहदानी सम्बन्धी पछिल्लो जानकारी ।
मंसिर १९, २०७८ ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानीको आवेदनको लागि यही मंसिर १५ गतेबाट बुकिङ्ग खुला गरी आजबाट लाइभ इन्रोलमेन्ट शुरु भएको छ । राहदानी विभाग पछि विद्युतीय राहदानीको लागि लाइभ इन्रोलमेन्ट शुरु भएको यो पहिलो जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । यही हप्ता भित्र काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट लाइभ इन्रोलमेन्ट शुरु […]
December 5, 2021Read More
e-Passport- What’s New ? | विद्युतीय राहदानी के भइरहेकाे छ ?
मंसिर १० गते विभागबाट कार्ययोजना अनुसार नै रुपमा विद्युतीय राहदानी जारी हुँदै आएको छ । दैनिक रुपमा निवेदकको संख्या बढाउदै लगिएको छ । डिसेम्बर महिनाको पहिलो हप्ताबाट उल्लेख्य रुपमा विद्युतीय राहदानीको संख्यामा बृद्धि गर्ने कार्यक्रम छ । साथै डिसेम्बरको पहिलो हप्ताबाटै काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाहरुबाट लाइभ इन्रोलमेन्ट शुरु गर्ने कार्यक्रम छ । ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट […]
विद्युतीय राहदानी के भइरहेको छ ?
मंसिर १ गते त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागबाट मंसिर १ गते सताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यूलाई पहिलो वित्तुतीय विद्युतीय राहदानी पराराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काबाट वितरण गरी विधिबत रुपमा नेपालबाट विद्युतीय राहदानीको जारी कार्य शुरु । मंसिर २ गते दोश्रो दिन केही सेवाग्राहीहरु अनलाइनबाट समय मिति र समय बुक गरी तोकिएको समयमा विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित भवनमा आउनु भयो । […]